भोकका कारण कं’कालजस्तै भइसकेका ७ वर्षका बालक ग’म्भीर अ’वस्थामा भेटिएपछि, सके सहयोग नसके सेयर गरौं -
Home समाचार भोकका कारण कं’कालजस्तै भइसकेका ७ वर्षका बालक ग’म्भीर अ’वस्थामा भेटिएपछि, सके सहयोग...
भोकका कारण कं’कालजस्तै भइसकेका ७ वर्षका बालक ग’म्भीर अ’वस्थामा भेटिएपछि, सके सहयोग नसके सेयर गरौं
अल शबीन अस्पताल’को कु’पोषण वार्डका सुपरभाइजर डा. रागेह मोहम्मदका अनुसार समीमलाई अस्पताल ल्याउँदा उन’को ज्या’न जा’नै लागे’को थि’यो ।
समयमै सही निर्णय गरेर उन’लाई ब’चाउन सकिएको बताउँदै डा. मोहम्मदले अब उनको स्थिति सुधार भइरहेको बताए । डाक्टरका अनुसार समीम सेरब्रल पल्जी र ग’म्भीर कु’पोषण’का शि’का’र छ’न् । राजधानी सानाको अस्पताल ल्याउनका लागि समीमलाई लिएर १७० किलोमिटर भत्किएको जीर्ण बाटो यात्रा गर्नुपरेको थियो ।
समीमको उपचारको लागि उनको परिवारसँग पैसा पनि छैन । उनको परिवार उपचारको लागि दान’मा नि’र्भर छ । स्थानीय अस्पतालका डाक्टरले देशमा कु’पोषित बालबालिकाको संख्या बढिरहेको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघले यमनले विश्व’कै ठूलो मा’नवी’य संकट’को साम’ना गरिरहेको बताएको छ । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस*